Abshir Maxamed Cismaan oo ku guulaystay doorashada Xildhibaan heer degmo ee Sweden (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 15, 2018 7:51 g 0
Iyada oo bishaan Siteenbar 9-keedii doorashooyinka Baarlamaaniga ay ka dhaceen dalka Sweden degmooyinka iyo gobaladda uu ka koobanyahay dalkaas, isla markanaa Soomaali ay ku jireen dadka u tartamayey doorashooyinka Baarlamaanka ee heer gobol ayaa waxaa guul ka gaaray doorashooyinka heer degmo Abshir Maxamed Cusmaan oo kamid noqday Baarlamanka dalka ee heer degmo.
Xildhibaan Abshir oo u warramaya Radio daljir ayaa sheegay in uu kamid yahay xisbi kamid ah xisbiyadda dalka, ayna Soomaali kale ku tartamayeen kuraasta barlamaanka heer degmo, magaalada Eskinistiin oo u dhow magaalomadaxda Stockholm.
Shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa bogaadiyey guusha Abshir Cismaan. Abshir ayaa ugu baaqay Soomaalida qurbajoogta in ay dalalka ay jogaan ay ka dhexmuqdaan, kana muuqdaan xisbiyadda dalaalkaas.
Leyla Cali Cilmi ayaa ayana heer federal noqotay Xildhibaan Sweden, noqotayna gabadhii ugu horraysay ee Soomaali ah, ama Muslim oo dhan, oo kamid noqota baarlamaanka Sweden.
Waraysiga oo dhinacyo baddan taabanaya waxaa waraystay Maxamed Lakiman, Xarunta Daljir Gaalkacyo.